ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ / အိမ်ထောင်ဖက်များထက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားသနည်း။ -
ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ / အိမ်ထောင်ဖက်များထက်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားသနည်း။ ဒါဟာစွဲလမ်းမှု (“ ငါထရမည်သို့မဟုတ်သေရမည်”) မှစွဲလမ်းနေသောတဏှာမှစစ်မှန်သော libido (“ ပေါင်းစည်းရန်တိုက်တွန်းခြင်း”) ကိုခွဲထုတ်ရန်ရှုပ်ထွေးသည်။ အဆုံးစွန်သောယခင်ကဲ့သို့တူညီသည်မဟုတ်။ “ Libido” ဆိုသည်မှာလိင်ဆန္ဒကိုရည်ညွှန်းသည် တစ်ဖက်နှင့်အတူ ဘယ်အချိန်မှာအလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်၏ရှေ့တော်၌။ ယနေ့အလွန်အမင်းထင်မြင်လွန်းခြင်းသည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများစွာကိုအမြဲတမ်းယားယံနေစေပြီး၊ တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုလိုချင်မှုနည်းသည်။ ရလဒ်? Way ကိုပိုပြီး orgasms ... ဒါပေမယ့်စိတ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းနှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်။
ကြည့်ရှုပါ: လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
ဤတွင်ဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှပြောခဲ့သည်မှာ -
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ဓာတ်သည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်အတိုင်းမခိုင်မာပါ။ ငါ Flatlined ကြပြီမဟုတ်, ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းလွယ်လွယ်ကူကူငါ့အလိုချင်သောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါ၏ ဒါကငါ့အသက် (၄၇ နှစ်) အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့တိုင်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အသက်အရွယ်ရှိအခြားယောက်ျားများနည်းတူအဘယ်ကြောင့်ကျဆင်းခြင်းမရှိကြောင်းတွေးမိဖူးသည်။ သူမငါ့ကိုလိင်ကိစ္စလျှော့ချဖို့တစ်ခုခုပေးနိုင်မလားဆိုတာကိုတစ်ချိန်ကဆရာဝန်ဆီသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လကို ၃ ကြိမ်မှ ၄ ကြိမ်အထိလိင်ကိုနှစ်သက်တယ်။ ငါတစ်နေ့ ၃ ကြိမ် ၄ ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။
ငါက porn ထက်ပိုပြီးအော်ဂဇင်မှစွဲလမ်းဖြစ်ကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုဟာအတူတကွလက်တွဲနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲနေလို့မရတဲ့ဘဝမှာပြproblemနာမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြproblemနာကတော့သေရေးရှင်ရေးကိစ္စပဲ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအော်ဂဇင်ဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ခက်ခဲပြီးဆုပ်ကိုင်ခဲ့ရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ချုပ်ကိုင်လေခက်ခဲလေ၊ အာရုံခံစားမှုပိုမိုများပြားလေလေ O. သို့ကြာကြာယူလေလေ၎င်းသည်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးစေသည့်ဆိုးဝါးသောစက်ဝိုင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ချွေးများထွက်နေစဉ်တစ်နာရီကြာဒဏ်ရာများရခြင်းကိုမနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့်အဆုံးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဘယ်တော့မှလျှင်။
ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုက်နှက်ထားရမယ်လို့အမြဲတွေးခဲ့တယ်၊ မမှန်ပါဘူး။ ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို / porn (ယခု 25 ရက်မှာ) ကိုရှောင်ရှားအတွက်တသမတ်တည်းအခါ, ငါ့အရူးလိင်စိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်လျော့နည်းစေ
လိင်, SO အများကြီးပိုကောင်းသငျသညျကိုခစျြသူတစ်ဦးဦးမဟုတ်, အိမ်သာပေါ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်ထိုင်လျက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ရှေ့မှာထိုင်လျက်နှင့်အတူပျော်မွေ့သောအခါအ SO ဖြစ်ပါသည်, SO ။
၎င်းသည်စီးနင်းလိုက်ပါရန်အတွက်ငရဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုငါသည်ညစ်ညမ်းသော (တစ်သက်တာအလေ့အထ / စွဲလမ်းမှု) ကိုတွန်းလှန်ရန်တိုက်တွန်းမှုများအလွန်လျော့နည်းသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်စွမ်းအင်နှင့် 'ဘဝ' ပိုမိုများပြားလာသည်ကိုသံသယကင်းစွာပြောနိုင်ပါပြီ။ ထိုအားထုတ်မှုအမှန်တကယ် WORTH များမှာ - အားလုံး IT!
သင်၏အပေါက်ကိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်သင့်အားကူညီခြင်းမှရရှိသောအရာသည်ဘာမျှမရှိကြောင်းမိတ်ဖက်တစ် ဦး ကသင့်အားမကြာခဏပြောနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှ၏ (နှင့်နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံ) ၏အဖြစ်မှန်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါတယ်ကတည်းက Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှုဤရောဂါသည်မိတ်ဖက်များကိုထပ်တူပြုခြင်းမှချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ သူဟာအမြဲလိုလိုချိုချိုသာသာနဲ့လိုချင်နေသူပါ။
ကောင်းမွန်သောသတင်းမိတ်ဖက်မကြာခဏကပုံရသည်ထက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားပိုပြီးကိုချစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူတို့ အလိုတခုတည်း တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားထားရှိရန်လို။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုနောက်ကွယ်ရှိအာရုံကြောဓာတုဗေဒတွင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှစိတ်လိုကိုယ်လျောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသိထားပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ အတူစမ်းသပ်စဉ်းစားပါ နေ့စဉ် Bond အပြုအမူတွေဒါပေမယ့် လျော့နည်းမကြာခဏ အော်ဂဇင်။